मेनुका पौडेलको यस्तो समाचार किन शेयर गरे हास्यकलाकार तथा निर्माता किरण केसिले ? - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १२, २०७५ समय: २१:०८:३५
ईटहरी/ हामिलाई लाग्छ कसैको सहयोगको लागि एक शेयर निकै महत्त्वपूर्ण हो । सत्य यहि हो पनि, एक शेयरले कसैलाई ठूलो सहयोग पुग्छ भने किन नगर्ने ? तर, यस्ता शेयरले कहिले काहीँ आफैलाई कमजोरी बनाउछ । अर्थात त्यहा लेखिएका कुराहरुका कारण पनि अरुले आफुमाथी औला उठाउने ठाउँ पाउछन् । अहिले यस्तै भएको छ । अझ सेलिब्रेटिले यस्तो काम गर्यो भने त आलोचना टन्नै खेप्नु पर्छ ।
यस्तै अवस्था हुदैछ हास्य कलाकार तथा निर्माता किरण केसिको । तपाईले माथिको तस्वीरमा हेर्नुभयो भने सामान्य लाग्ला । मेनुकालाई सहयोगको लागि शेयर गरियो भन्नुहोला । तर त्यो समाचारको हेडलाईनमा प्रयोग गरेको एक शब्दले समाचार आपत्तिजनक छ भन्न सकिन्छ ।
किनकी जहाँ मेनुकालाई ‘अन्धी’ भनेर सम्बोधन गरिएको छ । उता समाचारमा पनि त्यही शब्दलाई दोहोर्‍याईएको छ । ‘अन्धी’ शब्द नेपाली समाजको लागि अपाच्य हो । यस्तो कुरालाई ख्याल नगरी केसिले किन शेयर गरे ? त्यो उ नै जानुन ।
तर कलाकार जस्तो मान्छे, जो राष्ट्रको गहना हो, यस्तो कुरालाई ख्याल नगर्दा आलोचित हुन सकिन्छ । उनले २ दिन अघि शेयर गरेको उक्त पोस्टको कमेन्टमा ‘अभिमान जङ्ग संखरले – अन्धी हैन दृष्टिबिहिन भनौ’ भनेर कमेन्ट पनि लेखेका छन् । तर त्यो कुरालाई वास्ता नगरी केसिले सो पोस्ट त्यसै छोडेका छन् । केसि यतिबेला ‘दाल भात तरकारी’ निर्माणको दौडधुपमा छन । तर शेयर गर्नेबेला नै यस्तो कुरालाई उनले बिचार भने गर्नुपर्ने हो ।